QM oo sheegtay in dalal ay ka mid tahay Soomaaliya ku xadgudbaan Caruurta, Digniin ayaa wadamadaas loo jeediyay. – Balcad.com Teyteyleey
Golaha ammaanka Qaramada midoobey ayaa shir yeesheen waxay ka digeen xadgudubyada loo geysto caruurta ku nool dalalka Afgaanistaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Ciraaq, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Suuriya iyo Yemen.
Warbixintan Golaha Ammaanka uu soo saaray ayaa lagu sheegay in Caruur ka badan 15,500, inay noqdeen dhibanayaal la kulma xadgudubyo ay ku jiraan heerarka naxdinta leh ee dilka iyo dhaawaca.
Golaha ammaanka ayaa sheegay in Caruurta laga qeyb geliyo iska hor imaadyada hubeysan, oo lagu soo bandhigo heer aan la aqbali karin kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha hubaysan ee aan dawliga ahayn.
“Ma aqbali karno in xadgudub loo geysto Caruurta, Dalalka lagu dhibaateeyo Caruurta Waxaan ka Dalbanaynaa inaan ka fikirno sidii loo badbaadin lahaa Caruurta,lagana Ilaaliyo Jir-dilka iyo dhaawac halista ah ee la gaarsiinayo” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres.
António Guterres ayaa sheegay inuu ku celinaayo baaqiisa ku saabsan dhinacyada isku haya dagaalka si ay ugu hoggaansamaan mas’uuliyadda ilaalinta Carruurta dalal ay ku jirto Soomaaliya, iyada oo waafaqsan waajibaadka saaran sharciga caalamiga ah ee bini’aadanimada iyo xuquuqda aadanaha.
Dhanka kale Golaha Ammaanka ayaa sheegay in xadgudubyada loo geysto caruurta inay ka mid yihiin dilka, dhaawaca, dharbaaxada, kufsiga, afduubidda carruurta xaaladaha dagaallada iyo kuwo kale.
The post QM oo sheegtay in dalal ay ka mid tahay Soomaaliya ku xadgudbaan Caruurta, Digniin ayaa wadamadaas loo jeediyay. appeared first on Ilwareed Online.